Loko, firafitra, tsipika, singa tsotra ho an'ny trano mihaja | Hongfu Besam Design
Home / Interior design / Loko, firafitra, tsipika, singa tsotra ho an'ny trano mihaja | Hongfu Besam Design
2020 / 10 / 29 FisokajianaInterior design 969 0
Ny fitiavana, madio sy madio, avy lavitra
Manandrana, rehefa reraka loatra ny sandrinao
Mba hahatratrarana ilay kintana tsy tratra
Ny tompon'ity trano rihana telo ity dia fianakaviana enina izay niara-nipetraka nandritra ny telo taona. Amin'ny raharaham-barotra, dia tapa-kevitra toy ny cheetah izy ary maniry mafy ny hifehy ny orinasany, na dia eo amin'ny fiainana aza dia mazoto kokoa amin'ny fahatsoran'ny fiainana amerikana izy, ka aleony fahatsapana maivana sy maoderina amin'ny fahatsorana maoderina. Ny tontolo mamirapiratra sy misokatra dia mamela azy hankafy fiainana milamina sy milamina.
Satria trano kely antonony ity, dia afaka mifanaraka amin'ny fampiasana ny trano amin'ny ankapobeny, noho izany tsy nanova firafitra ny firafitra ankapobeny izahay ary nifantoka tamin'ny famoronana ny rivotra iainana sy ny fandalinana ny antsipiriany. Ny fampiasana singa tsotra toy ny loko, ny firafitra ary ny tsipika dia mitambatra mba hamoronana tontolo iainana avo lenta miaraka amin'ny fahatsapana ny halaliny sy ny fanamboarana. Izy io dia maneho ny fomba fiaina mahazatra an'ny sangany amerikana maoderina, miaraka amin'ny fampidirana zavatra tsotra sy mora amin'ny zavatra, fa koa ny hery voajanahary sy ny tantaram-pitiavana.
Tamin'ny alàlan'ny famakafakana ny fikarohana ara-psikolojia momba ny lokon'ny tompon-trano, dia nanangona loko telo lehibe izahay: volondavenona mafana, mavokely mavokely ary turquoise maivana. Nikasa kokoa ny fametrahana ny habaka arakaraka ny toetran'ny tompony manokana izahay, mampiditra ireo firafitra marefo amin'ny antsipiriany momba ny famolavolana mba hahatonga ny habaka iray manontolo hanana fihenjanana ara-javakanto sy fanehoana fihetsem-po.
Tsy toy ny fomban'ny Amerikanina nentim-paharazana, izay feno tsipika manintona sy be pitsiny ary haingon-trano mihoampampana, misafidy tsipika madio sy tsotra isika, izay tapaka avy amin'ny rindrina sy any ambony, ary lasa singa mpamorona manerana ny habakabaka. Ny tsipika metaly dia tafiditra ao amin'ny antsipirian'ny tsipika telo-manda amin'ny rindrina, maneho ny endrika marobe amin'ny sehatra ara-javakanto amin'ny fomba kanto, mamorona fifandanjana an-tsary mivaingana.
Rivet vy, bokotra mivalona, ​​tsipika handrail tsotra dia manana fahatsapana firafitra sy fampiononana lehibe, manolotra firavaka mihaja mety. Ny fatana fandoroana, izay singa misolo tena ny fomba amerikanina, dia voalamina ao ambadiky ny seza, ary ny maodely notsorina dia voafintina sy voafehy nefa tsy dia masiaka loatra ary sarotra ny tsy miraharaha.
Taorian'ny fanitarana ny karazan-trano tany am-boalohany dia namboarina ny faritra fiasan'ny piano, nandao ny haingo sarotra ary mampiseho ny antsipirian'ny fiainana ambany faran'izay ambany.
Noho ny faritra voafetra ao an-dakozia tany am-boalohany, ny fiasan'ny lakozia tany andrefana dia nafindra tao amin'ny efitrano fisakafoanana, toerana nanaovana fanaovan-tsakafo, dite folakandro ary ny fakana entana maina rehetra indray mandeha, hisorohana ny hetsika miverimberina mankany an-dakozia sy any amin'ny efitrano fisakafoanana. Ny habaka iray manontolo miaraka amin'ny loko tsotra sy maivana toy ny tonony, ny fiarahamonina avo amerikana tian'ny faran'ny taonjato farany volomparasy talaky toy ny loko haingon-trano hitsambikina avy amin'ny loko, miaraka amin'ny fiakanjo kanto sy mahafinaritra.
Ny chandelier kristaly sy ny seza fisakafoana miolakolaka dia manome gadona sy hatsarana mavitrika amin'ny habakabaka, raha ny sary hosodoko metaly lavender kosa dia maneho rivotra sy tantaram-pitiavana vaovao, mampiseho tsara ny toetran'ny tompony sy ny fahamoran'ny fiainany andavanandro.
Ao ambadiky ny varavarana fitaratra misy zavakanto tsy manam-paharoa dia toerana malalaka ao an-dakozia misy taila marbra beige, takelaka varavarana miloko volomparasy mafana ary taila volon-trondro maivana, izay manohy ny feony toy ny efitrano fisakafoana. Miorina amin'ny fahatsorana sy ny fahamendrehan'ny volavolan-doko mba hanaovana malalaka kokoa ny fahitana ny habakabaka, ny kabinetra mihantona sy ny gorodon'ny kabinetra dia maneho ny fikatsahan'ny mpamorona antsipiriany farany.
Eo ankavanan'ny faritra piano no misy ny zaridaina voalohany, noho ny faritra kely ao amin'ilay faritra famolavolana ny fanamorana, miaraka amin'ny fanaka fambolena zaridaina Japoney mba hilazana ny fahatsoran'ny fahatsorana. Isaky ny santimetatra dia aharihary ny hatsaran-tarehy, mamorona rivo-piainana miadana.
Ny loko volondavenona sy fasika ary tantely dia mamorona rivo-piainana mafana sy milamina. Ny mombamomba ny lohan'ny farafara dia mizara ny refy volamena, ary ny tsipika plaster dia ampiasaina mba hamoronana seho frame mba hampifantoka ny fahitana, ampiarahina amin'ny rindrina endrika telo refy hanasongadinana ny gadona habaka. Tamin'ny safidin'ny fandriana, nandao ny fomba amerikana klasika nentim-paharazana izahay ary nifidy ny fanaka amerikanina vaovao miaraka amina firavaka sinoa, ny toetran'ny fampidirana tonga lafatra amerikanina sy sinoa.
Ny efitranon'ilay zanaka vavy dia manohy ny loko fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana, amin'ny alàlan'ny fampitahana ny volondavenona mafana, mavokely mavokely, turquoise maivana dia maneho endrika rivotra iainana hafa.
Ny tohatra iray manontolo dia vita amin'ny volondavenona avo lenta, ary ny rindrina dia hosodoko amin'ny loko mitsambikina, ny fitambarana volondavenona sy manga dia feno vokany mampientam-po, fikitihana manga mitsambikina. Ny tsipika dia ampiasaina mazava tsara amin'ity habaka ity, ny tsipika plaster amin'ny rindrina, ny fisorohana ny hazo, ny tsanganana amin'ny varavarana hazo mafy, ny tsanganana amina tsanganana Romanina, ny fanodinana antsipirihany rehetra sy ny haingon-trano, dia ny fahafahan'ny mpamorona mifehy ny fomba fampisehoana iray manontolo.
Ny rihana fahatelo dia ny efitrano fandraisam-bahiny an'ny tompony sy ny vadiny, miaraka amina volondavenona sy manga fotsy ary tantely, izay loko lehibe indrindra amin'ny habaka. Ny loko manga hatsatra dia be mpampiasa hatraiza hatraiza amin'ny habakabaka mba hanehoana toetra malefaka, toy ny eny amoron-dranomasina misy lanitra manga sy rahona fotsy ary rivotra.
Satria ny firafitry ny rihana fahatelo dia tsy manana efitrano fidiovana tokana, izay tsy nahafa-po ny filan'izy mivady sy ny zanak'izy ireo, koa hovainay ho efitra fidiovana roa ny efitra fandroana tokana. Ny efitrano fidiovana tany am-boalohany dia nizara ho roa, miaraka amin'ny 1/2 ho efitrano fidiovana lehibe ary ny 1/2 ho efitra fandroana ho an'ny vahiny, ka nahatratra ny fiainana manokana sy ny fahamendrehan'ireo toerana tsirairay.
Ny efitranon'ny ankizy amin'ny rihana fahatelo dia ho an'ny zanaka lahy, ary ny efitrano fandriana dia efitrano misy fampiasa maro hafa izay ampiasaina ho faritra fianarana. Nisafidy volondavenona, aqua, turquoise hazavana izahay ary atambatra amin'ny ambainy leoparda, mba hahafahany miala sasatra amin'ny atitany mamelombelona sy mahafinaritra ary mahatsapa ny fahatsorana.
Ho an'ny mpamorona, ny famolavolana dia tsy fitambaran'ny singa tokana, fa ny fitambaran'ny singa maro, ary mitaky fitambarana biolojika ny firafitry ny habakabaka, ny hatsarana kanto ary ny filan'ny mpanjifa mba hananganana fomba fiainana tsy manam-paharoa an'ny tompon-trano. Ny sandan'ny famolavolana dia tsy miankina amin'ny vokatry ny fahitana, fa kosa amin'ny fanarahana ny filan'ny tompony amin'ny fomba, ny toetrany ary ny fampiasana azy amin'ny sehatra maro.
Fanadihadiana ny karazan-trano tany am-boalohany
❶ Ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny rihana voalohany dia voan'ny jiro avy amin'ny lavarangana.
Space Toerana kely ao an-dakozia
:: Fanazavana ireo hevi-dehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny
❶ Esory ny varavarana sy ny varavarankely lavarangana tany am-boalohany hanitatra ny toerana honenana ary hampitombo ny faritra fiasan'ny piano.
❷ Toerana voafetra ao an-dakozia tany am-boalohany, manitatra ny lakozia andrefana mankany amin'ny efitrano fisakafoanana handraisana ny lafaoro etona, pantry, fitehirizana ary asa hafa
:: Fanadihadiana karazan-trano tany am-boalohany
❶ Ny efitranon'ny olona taloha dia faritra voakarakara ary mila gorodona hampiasaina ho takelaka.
❷ Ny efitrano fatoriana roa dia tsy azo ampiasaina tsy miankina amin'ny efitra fandroana tokana amin'ny rihana faharoa
❸ Ny haben'ny efitrano fampiasa any an-toerana kely kokoa
❶ Saraho amin'ny efitrano fandroana roa ny efitranon'ny tranon'ny olona antitra, manova ny andalana fidirana mankamin'ny efitranon'ny olona taloha.
❷ Manala ny lavarangana ary mampitombo ny haben'ny faritra maro karazana
❶ Efitra fatoriana roa tsy azo alefa amin'ny ambaratonga telo na ❶.
❷ Faritra misy multipurpose kely kokoa
❶ Rakitry ny efitra fisarahana ho an'ny fiakanjoan'ny tompona vehivavy ❶
❷Fandroana roa tsy miankina miankina, manova ny làlan'ny fidirana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mankany amin'ny faritry ny akanjon'ny efitrano fatoriana
❸ Misaraka efitra sy toerana malalaka ho an'ny efitran-jaza, hampiasaina ho faritra ianaran'ny zanaka lahy.
Fombany: Amerikanina maivana sy mihoa-pampana
Karazan-trano: trano bongo
Lehiben'ny mpamorona: Xia Zhang
Adiresin'ny tetikasa: Chengdu. Ala Roa Poly Rivers
Previous :: 120 Sq.Ft. Duplex koa dia mety hanana tohatra miolikolika tena kanto | Fananganana Ermu Next: Zazavavy tokan-tena 35 taona mpitovo any Japon, 30 metatra toradroa Fiainana mahafinaritra Mahafinaritra mandritra ny 11 taona, 200,000 XNUMX ireo mpiserasera no saro-piaro amin'ny fitsiriritana!